Archive du 20191226
Mafana ny politika Mila mitandrina ny fanjakana
Ny marainan’ny 24 desambra lasa teo no nanatitra taratasy fangatahana hanao diabe miainga manoloana ny kianjaben’i Mahamasina mandrapahatonga eny amin’ny tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjakana ny sabotsy 28 desambra izao,
Manandafy Rakotonirina Hisy ny hetsika ho fahatsiarovana azy
Teo amin’ny sehatry ny tontolo politika no nahafantarana an’Atoa Manandafy Rakotonirina, izay mpamorona ny antoko MFM. Hotsaroana rahampitso zoma 27 desambra ny nananganan’ity filohan’ny antoko ity, io antoko politika MFM io.
Voka-pikarohana sy fanohanana azy « Mila fanovana goavana ny eto Madagasikara »
Ny fanohanana voka-pikarohana na « soutenance de Mémoire » na « Thèse » eto Madagasikara dia hafahafa satria miavaka amin’izay fahita maneran-tany,
Andro ratsy Dibodrano Antalaha, 1 maty tany Maroantsetra
Tao anaty oram-be nitarika fiakaran’ny rano no niatrehan’ny mponina tany amin’iny faritra Avaratra Atsinanan’ny Nosy iny ny fetin’ny noely omaly,
Andry Rajoelina mivady Nanampy ireo ankizy marary
Tonga nizara fanomezana sy kilalao ho an'ireo zaza rehetra tsaboina eny amin’ny hopitaly HJRA sy CENHOSOA Soavinandriana ny filoham-pirenena mivady noho ny fetin’ny asaramanitra ny 24 desambra lasa teo.
Minisiteran’ny fambolena Nisakoroka niady akoho ny mpiasa
Raikitra ny barofo ka nifandrombahan’ny mpiasa an-terisetra ny akoho hozaraina ho an’ireo mpiasan’ny mpiasan’ny minisiteran’ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (MAEP).
TSENAN’NY AKOHO AMAM-BORONA Maina tamin’ny fetin’ny Noely
Maina ny tsenan’ny akoho amam-borona nandritra ny fankalazana ny fetin’ny Noely omaly alarobia 25 desambra.
CHRD ITAOSY Zazavavy kely iray no teraka tamin'ny sasak'alina
Miisa valo ireo zazamenavava teraka tao amin'ny CHRD Itaosy ny alin'ny 24 desambra teo.
Andrefan’Ambohijanahary Polisy iray hita faty vao maraina
Polisy iray no hita faty tetsy Andrefan’Ambohijanahary ny marainan’ny talata teo. Tsy voamarina na nisy namono izy na kosa noho ny aretina. Nisy dian-dratra kely sy nivonto teo amin’ny vavany.
MAHAJANGA 1104 voan’ny VIH/SIDA, tsy hita ny 400
Miisa 1.104 ireo olona fantatra fa mitondra ny otrik’aretina Vih/SIDA ao Mahajanga. Misy amin’izy ireo no mbola tanora vao herotrerony
MAHAJANGA Nahitana fatin-dehilahy efa simba
Tranga mampalahelo no hita tao Mahajanga ny talata 24 desambra maraina teo raha efa nisomebiseby tamin’ny fandraisana ny fetin’ny Noely avokoa ny rehetra. Fatin-dehilahy iray manodidina ny 40 taona,